Global Voices teny Malagasy · Marsa 2015
Septambra 2020 38 Lahatsoratra
Pejy 4 amin_ny 11
Tantara tamin'ny Marsa, 2015
“Nosamborina Noho Ny Fividianana Sigara sy Ronono Izy” Hoy Ny Vadin'ilay Tompon-daka Manerantany Teo Aloha avy ao Bahrain
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana20 Marsa 2015
Voasazy higadra 10 taona an-tranomaizina "noho ny fivoahana hividy sigara sy ronono" i Mohamed Mirza, Bahrainita nahazo medaly volamena teo aloha tamin'ny jujitsu Breziliana, hoy ny vadiny nisioka.
Talantalana Foana sy Kibo Migororoana: Voazava Ny Tsy Fahampiana Ara-toekarena Ao Venezoela
Amerika Latina19 Marsa 2015
Na teo aza ny teny fampanantenana hisian'ny taona vaovao, tsy tamin-kafaliana no nanombohan'ny Venezoeliana ny taona 2015, fa niaretany ny mangidy indrindra teo amin'ny tsy fahampiana ara-toekarena tato anatin'ny fahatsiarovany akaiky indrindra
Afaka Manaisotra Ny Marika Borat-n'i Kazakhstan Ve i Sabina Altynbekova?
Azia Afovoany sy Kaokazy19 Marsa 2015
Nampiasa ny lazany ho toy ny marik'i Kazakhstan ilay tanora mpilalao volley-ball Sabina Altynbekova. Hatraiza no hahavitany izany?
Iran: Nosoloina Sarim-bavahadin'ny Anjerimanontolo Ny Mariky Ny Nokleary
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana19 Marsa 2015
Amin'izao fotoana izao, dia ao anatin'ny fifampiraharahàna miaraka amin'ny P5+1 any Lausanne, Soisa, momba ny fandaharanasa nokleariny ny governemanta Iraniana
Tetikasa Iray Miainga Eny Ifotony Hanaovana Sarintanin'i Amazon
Amerika Latina18 Marsa 2015
Tetikasa ifandrimbonana hananganana sarintany miainga avy eny ifotony ary mifantoka amin'ny faritra ao Amazona, any Amerika Atsimo, ny Mapazonia.
Natsinkafon'ny Media Sosialy Ny Filoha Gambiana Noho Ny Nampiasàny Ny Taratasin'i Obama Ho Toy Ny Fampielezankevitra
Afrika Mainty18 Marsa 2015
Nandefa taratasy fiarahabana ho an'ny vahoaka Gambiana noho ny faha-50 taonan'ny fahaleovantenany ve ny Filoha Obama sa taratasy fankatoavana ny fitondran'ny Filoha Yahya Jammeh? Miankina amin'izay itodihan'ny fanontanianao ny valiny
Nakatona Vonjimaika Nandritra Ny Fihaonamben'ny Hoavin'i Ejypta Ny Habaky Ny Mpanaramaso Ny Zon'Olombelona
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana18 Marsa 2015
Noesorina ny fanakatonana ny habaky ny Mpanaramaso ny Zon'olombelona tamin'ny fihaonambe ara-toekarena tao Ejipta rehefa nandefa fanairana tao amin'ny Twitter ny mpanao gazety iray.
Niezaka ny nandositra ilay rafitra mampiditra ny atsasaky ny zazavavy ao amin'ny firenena atsimon'i Afrika misy azy hanambady aloha, sy lasa reny alohan'ny fotoana, ity zazavavy 18 taona antsoina hoe Memory Banda ity.
Vietnamiana Mpaka Sary Fanao An-gazety Manohy Mitokona Tsy Mihinan-kanina Taorian'ny Efatra Taona Nifonjàny
Mediam-bahoaka17 Marsa 2015
Ho fanampin'ny sazy famonjàna mandritry ny fotoana lava sy ny fihazonana azy tamina toerana tsara ambina, mbola niharan'ny endrika sazy hafa ihany koa i Minh Man: fomba fitondra faran'izay tsy rariny sy manavakavaka atao any am-ponja.
Tendrom-Po tsy mba Namana tao amin'ny Fampitam-Baovaon'ny Fiaraha-monina Panamenana
Panamà17 Marsa 2015
Ny kabarin'i mpanao lalàna Rodriguez no nilaza ny vahiny mpifindramonina ho "faikan'olona". Namaly Bontana tamin'ny alalan'ny ngonongonona mampiady hevitra mamely ny Panameana ilay Venezoelana mpifindramonina Rita García mampitaha azy ireo amin'ny "gidro" ary milaza azy ireo ho tsy mahay manaja ny kolontsaina vahiny.